Ol-ole Nadaafadeed Oo Balaadhan Iyo Dhir Beeris Ka Qabsoontay Xarunta Deegaanka - Cakaara News
Ol-ole Nadaafadeed Oo Balaadhan Iyo Dhir Beeris Ka Qabsoontay Xarunta Deegaanka
Jigjiga(Cakaaranews) Khamiis 3da August 2017. Waxaa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ka qabsoomay ol-ole balaadhan oo nadaafadeed iyo dhir beerid kor loogu qaadayo faya dhawarka, ilaalinta deegaanka iyo bilicda caasimada jigjiga.
Hadaba ol-olahan balaadhan ee nadaafadeed ee ka qabsoomay magaalada jigjiga ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiin sare oo kaabanee ah, Shaqaalaha xafiisyada heer deegaan, MM jigjiga iyo ardayda jaamacadaha iyo kuliyadaha dalka ka yimid ee ku jira fasaxa ee udhalatay deegaanka. Iyadoo mas’uuliyiintii kasoo qaybgalay ol-olahan balaadhan ee nadaafadeed ay sheegeen inay ol-olahan iska kaashadeen Xarunta dhexe ee XDSHSI iyo xafiiska waxbarashada DDSI islamarkaana uu yahay mid kor loogu qaadayo nadaafada, ilaalinta deegaanka iyo bilicda magaalada jigjiga. Waxayna intaa ku dareen inay diyaar u yihiin sii xoojinta wax walba oo kor uqaadaya horumarka deegaanka.
Dhankooda waxaa iyana ka hadlay qaar kamid ah ardayda deegaanka ee ku jira fasaxa xagaaga ee ka kala yimid jaamacadaha dalka iyo kuliyadaha dalka iyo deegaanka oo sheegay inay maanta usoo baxeen inay muraqooda ku nadaafiyaan kuna soo saaraan bilicda magaalada jigjiga islamarkaana ay ka go’antahay siday ooga qaybqaadan lahaayeen horumarka deegaanka.
Ugu danbayna ol-olahan balaadhan ee ay wadeen mas’uuliyiinta deegaanka, shaqaalaha iyo dhalinyarada fasaxa ah ee ka yamid jaamacadaha iyo kuliyadaha dalka iyo deegaanka ayaa si wada jir ah u beeray dhir aad utira badan islamarkaana wax ka badali doonta bilicda magaalada.